Apple mandefa ... telefaona iray. Misy olona hafa mangozohozo? | Martech Zone
Talata, Janoary 9, 2007 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Douglas Karr
Ianareo mety mahafantatra na mety tsy hahafantatra fa nifindra tany amin'ny MacBook Pro tany am-piasana aho. Faly aho amin'izany, manaitra. Tsara ny OSX… saingy mbola manana rindranasa nianjera aho ary mbola nanana olana tamin'izany. Tsy dia tiako loatra izany fa ny ankohonako dia Mac daholo. Manana G4 iray aho ary ny sisa amin'ny solo-saiko dia PC mandeha XP, miaraka amin'ny Buffalo Linkstation izay miasa Linux.
Izaho irery ve no lehilahy eto amin'izao tontolo izao izay tena tsy gaga fa nanangana telefaona i Apple? Olona telefaona io! Fomba fiteny toy ny 'revolisionera' no ampiasaina. Revolisionera? Marina ve? Inona no tsy hitako? Tsy finday 2.0 fotsiny ve ity?
Andao hidina ny lisitry ny fiasa ary lazao amiko hoe aiza no tsy mety:
Raha tokony keypad mahazatra, ny iPhone dia mampiasa teknolojia Apple manana patanty antsoina hoe "multi-touch". Tsy mampiasa stilosy izy io, manana “fihetsika amin'ny rantsan-tànana marobe” ary milaza fa tsy miraharaha ireo fikasihana tsy nahy. Nampitaha izany tamin'ny Apple UIs roa hafa ny asa - ny totozy amin'ny Macintosh sy ny kodiarana tsindrio eo amin'ny iPod.
Mahafinaritra, nanatsara lamba pad izy ireo.
Efijery touchscreen 3.5 m amin'ny keyboard virtoaly.
Wow, efijery lehibe kokoa. Efa manana 'keyboard virtoaly' amin'ny findaiko aho.
iPhone dia mitantana ny OS X, ny rafitra fiasa mahazatra an'ny Apple; araka ny fandrakofan'ny Engadget mahatalanjona: “Avelantsika hamorona rindranasa sy tambajotran ny kilasy birao fa tsy zavatra kilemaina hitanao amin'ny ankamaroan'ny telefaona, fa fampiharana birao tena izy ireo.”
Azoko atao ny mihazakazaka Illustrator amin'ny efijery 3.5 ″? Yeah! Misy RAM 2Gb ve?
Mitrandraka amin'ny iTunes: “iTunes dia hampandeha ny haino aman-jery rehetra amin'ny iPhone - nefa koa angona angona iray taonina. Fifandraisana, kalandrie, sary, naoty, tsoratadidy, kaonty mailaka… ”
Eny, nahazo izany tamin'ny findaiko izao koa.
Ny kapila noforonin'i Apple dia manerana ny iPhone manontolo: «efijery 3.5-inch, efijery vahaolana avo indrindra nalefanay, 160ppi. Iray ihany ny bokotra, ny bokotra “an-trano” […] mahia noho ny finday finday hafa rehetra… ”
Tsara kokoa… haingana kokoa… matanjaka… io ny telefaona $ 6 Miliara.
Fakan-tsary 2 megapixel natsangana
Ie, azonao izany. Ary ny findaiko manao video sy audio koa.
Fampisehoana haino aman-jery miavaka - horosoroy ny mozikao, horonan-tsary malalaka, rakikira rakipeo, mpandahateny natsangana…
Nahazo ny sasany amin'izany koa. 3.5 ″ ve ny widescreen? Ho an'iza, parasy?
Ampifanaraho amin'ny PC na Mac-nao ny iPhone (ho an'ny fifandraisana sns)
Fomban'ny telefaona mahazatra - SMS, kalandrie, sary sns .. Miaraka amin'ny sary dia misy sensor mihetsika izay mihodina sary rehefa mamadika ny telefaona ianao.
Mihodina ny efijery rehefa mivoaka ilay klavier aho. Ok… nahazo ahy ianao… mamy ny sensor sensor.
Fandraisana mailaka Visual
Mamy. Ny feo an-tsoratra no tena nilaiko rehefa nijery ny mailaka nataoko teny amin'ny làlambe aho! Afaka mikorisa amin'ny rantsan-tànana roa aho rehefa mihazakazaka mankao amin'ny arofanina!
Mailaka HTML manankarena - miasa amin'ny serivisy mailaka IMAP na POP3. Miteraka olana amin'ny Blackberry ity!
Ny ahy manao an'izany.
Ny browser Safari dia mandeha amin'ny iPhone - “io no finday voalohany ampiasaina amin'ny finday voalohany.” Mampiseho ny NYT mihazakazaka ao amin'ny iPhone ny asa - ny tranonkala tena izy fa tsy kinova WAP mahamenatra.
Shenannigans! Mihazakazaka amin'ny Opera Mobile aho ary 'azo ampiasaina tanteraka'.
Miaraka amin'ny mpizaha sy fifandraisana Internet… yup, ataoko ihany koa izany. Mazava ho azy fa ny efijery fanampiny an'ny efijery dia hanampy ahy hahita ny lalako mora kokoa.
Widget izay mifandray amin'ny Internet milamina (amin'ny alàlan'ny WiFi sy EDGE)
Azoko atao ny manamarina ny toetrandro rehefa mandeha miasa aho! Oh… miandry segondra…
Mailaka IMAP "manosika" maimaim-poana avy any Yahoo
Fantatro fa mikorontan-tsaina aho momba an'io, saingy tsy azoko ilay izy. Toa izany betsaka ny hype amin'ny fanavaozana ny telefaona, sa tsy izany?
Mandrosoa horonan-tsary malalaka amin'ny fifandraisana video amin'ilay zazalahy ratsy ary ity geek Star Trek ity dia hianjera amin'ny valindrihana. Raha tsy misy an'io anefa dia izao fotsiny… sahiko hoy aho… telefaona iray.
Inona ny tohiny, mandefa fahitalavitra i Apple? Umm….
Sal: Ny fialantsiny manokana ho an'i Bill… teo anilany irery izy nanala tamin'ny sakafo atoandro androany ary efa nanisa taona firy tamin'ny fisotroan-dronono tokony avelany hividy iray. Tsy te-hanompa anao Bill aho, fa ity dia fanaratsiana marketing tsara ho an'ny telefaona.
Tags: paomaapple appleiPhone
Microsoft Mandroso dingana miverina miaraka amin'ny Outlook 2007
Jan 10, 2007 ao amin'ny 12: 40 AM
Mbola miandry ny revolisionera aho .. ary ny Applesauce 🙂 🙂
Jan 10, 2007 ao amin'ny 3: 01 AM
Vao haingana aho no nandany $ 400 tamin'ny vidéo iPod sy kojakoja mba tsy hitady hividy ilay iPhone aho. Mety ho tian'ny olona sasany ny iPhone, saingy aleoko fitaovana misaraka ho an'ny telefaona sy mpamaky MP3 toy izay fitaovana mety ho "jack of all trade master of none".
Jan 10, 2007 ao amin'ny 6: 38 AM
Heveriko fa ny zavatra mampiavaka ny iPhone dia ny fahatsorany. Izaho izao dia tompona telefaona tsy dia rehareha loatra izay heverina fa manao azy rehetra. Saingy tsy maintsy manosika bokotra marobe ianao (ary misy izany maro azy ireo), fa manala ahy fotsiny izany. Mianjera foana. Tsy misy syncing tsotra (he, tahaka ny androany, tsy azoko atao ny mampifangaro azy amin'ny OSX). Voatiry.
Eny, eny, ny singa tokana tsirairay dia mety tsy ho manokana manokana, fa ny fampifangaroan'i Apple dia mahatonga ahy hanantena fa mety hisy telefaona PDA tena azo ampiasaina.
Ny fahatsorana no teny ho ahy.
Gaga aho fa mahatsapa fianjerana amin'ny OSX. Manana asan-dahatsary mitaky be fangatahana amin'ny macs-ko aho, ary mahazo lozam-pifamoivoizana tena tsy fahita firy. Mety iray isan-kerinandro - ary na dia tsy mila mamerina indray aza aho. Mampiasa plug-in ankolafy be dia be ve ianao?
Fialana andraikitra: tompona faly be aho amin'ny Mac 5 eo ho eo 🙂
Jan 10, 2007 ao amin'ny 8: 32 AM
Tsy tiako hisy hieritreritra ahy fa mpanjifa Apple tsy faly aho… ary azo antoka fa tiako ny MacBook Pro-ko. Mampalahelo fa matetika dia tsy miala amiko izany! 🙂 Ny hevitrao momba ny 'fahatsorana' dia izay rehetra niainako hatreto. Tena gaga be fotsiny aho tamin'ny finday rehetra!
Tokony ho nazavaiko… Tsy mbola nianjera tamin'ny OSX mihitsy aho, ny sasany amin'ireo fandaharana ihany no mandeha.
Ilay fanilihako: hanana Mac 5 aho raha zakako izany. 😉
Jan 10, 2007 ao amin'ny 8: 49 AM
Miteny toy ny tena Mac N00b. Mihantona ao Doug…. ho azonao izany.
Tsy ianao ve ilay olona hilaza amiko foana rehefa nividy zavatra…. "Eny .... fa cooool izany. ”
hoy ianao Super-duper
Jan 10, 2007 ao amin'ny 9: 17 AM
🙂 Ie - mpiaro antsika Applefans hatrany no miaro 😉
Apple dia tena mahay amin'ny fikafika fotsiny. Rehefa mijery ny keynote dia alaim-panahy foana aho hanindry bokotra "Vidio izao". 'Soa ihany', ny vokatra tonga taty aoriana any Eropa (ary na dia any Norvezy aza) fa tsy Etazonia, ka afaka mamaky traikefa tena misy amin'ny mpampiasa "mahazatra" foana aho.
"Revolisionera" amin'ny AppleTalk dia midika hoe "Miasa". Mampalahelo fa tsy izany ny fenitry ny indostria…
10 Jan 2007 amin'ny 7:44 PM
Izaho indray, manantena aho fa tsy hivadika bilaogera 😉
Vao nahita ny fampisehoana fototra ho an'ny iPhone, ary toa ny finday dia hahatonga ny fitetezana tranonkala tsy ho azo atao (toy ny ankamaroan'ny telefaona ankehitriny), fa tena mahafinaritra. Toy izany koa ny ankamaroan'ny fisehony.
Ny nahagaga ahy ihany taorian'izay dia, hey, ity zavatra ity dia mihazakazaka OSX ary hanana fahefana Desktop - saingy tsy nisy na dia fampiharana iray aza nampiseho an'izany nandritra ny fampisehoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa: ny volana hatramin'ny fandefasana dia tsy ho foana hype vaovao 😉 Mahay i Apple amin'izany.
Tsaroako fony vao tonga ny iPod, geek maro no mitsikera momba izany. Tadidiko ny fitenenana iray hoe “eny, harddisk azo entina izy io, ka ahoana?”. Ary manana ny tsena izy ireo ankehitriny.
Amin'ny tsenan'ny telefaona dia tara ny fidiran'izy ireo, saingy matanjaka amin'ny fahaiza-miasa izy ireo, ary hanana tambajotra fizarana tena tsara any Etazonia izy ireo. Noho izany, tsena 1% amin'ny taona 2008 dia tsy tokony ho tratry ny tratra.
Fotoana mahaliana 🙂
Ity misy rohy mahaliana momba ny dikan'izany amin'ny famoahana amin'ny ankapobeny sy amin'ny fanitarana ny fanaovana bilaogy ihany koa: http://www.buzzwordcompliant.net/index.php/2007/01/10/two-approaches-to-mobile-publishing/
Ary mety ho voamarikao izany Yvonne niverina teo amin'ny velona indray.
Jan 11, 2007 ao amin'ny 10: 46 AM
Comatose tsara aho
Mila mivoaka bebe kokoa ireo mpankafy Apple
Sep 2, 2008 amin'ny 8: 08 AM
… Raha jerena indray, havaozinao ve ity lahatsoratra ity 😉?
Toa nisy fiatraikany tokoa ny iPhone, ary azo antoka fa nanova ny fampiasaiko amin'ny Internet izany.
Ny telefaona hafa nananako taloha dia afaka nanatanteraka ireo fiasa ireo tamin'ny lafiny ara-teknika, saingy sarotra, sarotra sy niadana izy ireo.
Sep 2, 2008 amin'ny 8: 49 AM
Tsy azoko antoka, Foo. Ny fizarana tsena sy ny lazany dia tsy mahagaga noho ny fivavahana amin'i Apple. Ny fiasa dia miakatra, fampisehoana misy valiny mikasika tsara kokoa, famahana vahaolana tsara kokoa… ary koa fivarotana app (tsy tena izy). Heveriko fa nampiakatra ny barany tokoa izy ireo - saingy mbola tsy mahita zavatra mihoatra ny fika 'mahafinaritra' aho.
Amin'ny lafiny ratsy, ny iPhone dia mbola mahazo marika ratsy ihany amin'ny fampiasana azo tsapain-tanana (mila jerenao hampiasa azy io, matetika amin'ny tànana roa) ary nisy hiccup maromaro - ao anatin'izany ny switch switch, ny tethering sembana (mampiasa azy io ho Internet Conn ho an'ny solosainao finday), ny kalitao mihena ambanin'ny 3g, ary maro hafa.
Ny fidinana fantsona no tena mahaliana kokoa - ny iPhone handeha hitodika miaraka amin'ny console gaming azo alefa. Mety ho mpanakalo tsena izany!
Android no OS misy finday izay jeren'ny masoko azy. Finday loharano misokatra izay afaka mihazakazaka amin'ny saika misy fitaovana tsy misy fetrany ary fivarotana Application misokatra dia mety ho fisondrotana lehibe mihoatra ny iPhone.